Sonam Kapoor iyo Kareena Kapoor Khan Filimkoda ‘Veere Di Wedding’ Oo Dhibaato Hor Leh Soo Wajahdey - Hablaha Media Network
Sonam Kapoor iyo Kareena Kapoor Khan Filimkoda ‘Veere Di Wedding’ Oo Dhibaato Hor Leh Soo Wajahdey
HMN:- Sonam Kapoor iyo Kareena Kapoor Khan filimkoda ‘Veere Di Wedding’ oo dhibaato horleh soo wajahdey.
Iyado horaan mashruuca ay ku moodabayan Kareena Kapoor Khan iyo Sonam Kapoor uu noqdey mid afka dhulka lagaley, filimka Veere Di Wedding aya soo wajahdey in hadana dib loo dhigo. Horaan aya larabey in duubista filimka bilaabato sandka 2016 dhexdiisa lakinse dib aya loodhigey sababo laxariiro Kareena uurkeda.
Filimka aya waxa hada soo wajahey dhibaato hor leh. Waxey umuuqata in Jimmy Sheirgill filimkisa xigo loo bixiye ‘Veerey Ki Wedding’, isla magaca filimka Sonam iyo Kareena lawada sugaye. Isku ekaanshaha magacyada labada filim aya dhibaato xoogan u keentey agaasinka filimka ahna aabaha Sonam ee Anil Kapoor.
Wararka aya sheegayan in Anil Kapoor warqad udirey wakaalada Indian Motion Pictures Producers’ Association (IMPPA) oo u xilsaaran xuquuqda filimada iney dhaxdhaxad ka noqdan.
Familka Kapoor aya ku doodayan in magaca Veerey Ki Wedding soo diwan gashten, dhanka kale director Ashu Trikha aya dhankisa sheganayo in magaca uu leyahay sido kale soo diwan geliye.waxu kalo sheegey inu heysto xaquuqda filimka iyo sharciyenta filimka.
Director Ashu Trikha aya sido kale sheegey in xaquuqda filimka eyka awood sareyso diiwan gelinta magaca filimka. Boqolkiba 80% in duubista filimka lasoo dhameye waxuna sheegey labada isbuuc soosocda inu dhameystiri dono duubista filimka.
Veerey Ki Wedding co-producer aya sido kale sheegey in IMPPA u ogolaatey dhamestirka filimka madamo qeebaha ugu badan ey duuben. Wararka aya sheegayan Anil Kapoor iney xaalada ku xumatey waxuna ku talo jira inu magac kale uraadiyo mashruucasi nasib darada kudhacdey.
Warbixintaan Waxaa Si Diyaariyay Soona Turjumay Yahye Yusuf….